Teacup Pomeranian Nongedzo: Chii Chaunofanira Kuziva Usati Watenga - Inobereka
Teacup Pomeranian Nongedzo: Chii Chaunofanira Kuziva Usati Watenga
Iyo Teacup Pomeranian idiki muhukuru asi yakakura murudo.
Izvi feisty madiki madiki kuva nehunhu hwakawanda uye rudo rwekupa.
Iwo ari saizi akasiyana eakakurumbira Pomeranian uye akakwana kune kugara kweimba.
Kana iwe uchinetseka kuti ungaisa sei maoko ako pane imwe yeiyi yakakurumbira mbichana saka ichi ndicho chinyorwa chako.
Kwete chete isu tichaenda pamusoro peyakajairwa mutengo renji yerudzi urwu, asi zvakare isu tinotsanangura akakosha emhando dzakasiyana matipi ekuchengetedza, nzira dzekudzidzisa uye nezvimwe zvakawanda ...
Panguva yaunopedzisa chinyorwa ichi iwe unenge waziva zvakawanda pamusoro peaya madiki asinganzwisisike madiki.
Teacup Pomeranian Ongororo
Yakawanda Sei Iyo Teacup Pomeranian Inodhura?
Teacup Pomeranian Imbwa Kuonekwa
Teacup Pomeranian Kuchengeta Nhungamiro
Sei Kudzidzisa A Mini Pomeranian
Iyo Teacup Pomeranian idiki vhezheni yeinodiwa Pomeranian.
Rudzi urwu rwakakwana kune vanogara mufurati. Iwe unogara uchizviwana uchivaraidzwa uye kunyaradzwa neiyi yehomwe-hukuru hwehukama hwehukama hwehukama. Kana iwe uchida shamwari diki iyo yakanaka kwenguva yekutanga varidzi vembwa saka izvi zvinogona kuve rudzi rwako iwe!
Kuzivikanwa: # 2.
Kurema: 3-6 mapaundi.
Mutengo: $ 1200 +.
Unhu: Inofambidzana, ine hupenyu uye inofadza.
Mutengo : $ 1000
Saizi : 16-28 mapaundi
Chiitiko : Pasi
Mutengo : $ 1200 +
Yemhuri Yakanaka : Zvimwe
Saizi : 3-6 mapaundi
Yadeurwa : Pasi / Pakati
Mutengo : $ 1800- $ 4000
Hupenyu Makore 12-15
Saizi : 10-20 mapaundi
Iyo Teacup Pomeranian idiki vhezheni yemureza Pomeranian .
Kunyangwe ivo vari vadiki ivo vanongoyevedza uye vakangwara sevabereki vavo vakuru.
Chikumbiro chikuru cheTeacup Pomeranian kukura kwavo - ichi chichava chinhu chekutanga chauchacherekedza kana uchitarisa uyu mudiki mwana.
Saizi yavo inovaita svutugadzike huru kekutanga varidzi vembwa vane nzvimbo shoma.
Kana iwe uine mhuri inonzwisisa mabatiro ekurapa imbwa diki saka iyo diki Pom Teacup ichave yakakwana mhuri chipfuwo.
Kupesana nekutenda kwakakurumbira rudzi urwu harusi yappy .
Kana ivo vachiramba vachidzidziswa iwe uchave uine anoteerera uye ane hunhu shamwari shamwari idiki zvakakwana kuunza chero kupi, uye inofambidzana zvakakwana kusangana chero nemunhu!
Zvido zvavo zvekushambidzika zvinogona kunetsa kune vamwe.
Nekudaro kana iwe uchikwanisa kubata kukwesha uku rudzi urwu kunodai saka iwo ari nyore rudzi rwekuchengetedza. Ingo rangarira kuti saizi yavo diki inogona kugadzira zvimwe zvehutano nyaya (zvimwe pane izvi gare gare).
Zvinyoro zvakapoteredza vana.
Yakakwana yehupenyu hwekugara.
Yakakura kune vanotanga.
Yakakurumbira uye iri nyore kuwana.
Diki saizi inoita kuti ive isina kusimba.
Inotarisana nediki diki chirwere.
Saizi yekudzidzisa inogona kuunza zvimwe zvehutano.
Kana zvasvika pakushandisa mangwanani neTeacup Pomeranian iwe unogona kutarisira kuti ichazadzwa nerudo uye kugara uchiteerera.
Mushure mekurega mwana wako abve mukreyiti yavo yehari yekutyora Teacup Pom yako anofara kutevera chirongwa chako.
Kunyangwe iwe uchida kupedza zuva uchizorora pamubhedha, kugadzirira vana chikoro, kana kuenda kuburikidza nemusangano wekufona, imbwa diki iyi ichave iri padivi pako!
Paunenge uchida kutiza zuva rako rakabatikana ndezvipi zvikonzero zviri nani pane kuenda kunze uye kutora mbichana yako kuti ufambe?
Kunyangwe hazvo rudzi urwu chisiri rudzi rwunoshanda ivo vachazoda maminetsi gumi nemashanu kusvika makumi matatu ekurovedza muviri zuva rega rega.
Paunenge uchifamba-famba padanda iwe unofanirwa kutarisira kukanganiswa nevasingazive vachikumbira kupfuudza imbwa yako. Nekuda kwehunhu hwavo Teacup Pom ichada kukwidza tarisiro uye inonakidzwa nekusangana nevanhu vatsva ava.
Mushure mekufamba kune chiitiko chako Teacup Pomeranian ichave yakasununguka zvakakwana kuti urambe uchizorora pamakumbo ako kana kutarisa kunze nepahwindo.
Kunyangwe iwe uchifunga kuva nevanhu pamusoro kana kusarudza kushandisa imwe-imwe-nguva imwe nembwa yako, yako Teacup ichave inochinjika uye inogona kufadza vashanyi vako kana kuzorora sezvaunoona show paTV.
Hazvina mhosva kuti iwe unosarudza kushandisa sei zuva rako, tarisira kuti usambove wega!
Rudzi urwu rudiki rucharamba ruri parutivi rwako sezvavanopuruzira muswe wavo unonakidza fluffy.
Kuve neiyi imbwa kunozokuita kunyemwerera zvisinei kuti zuva racho raive rakashata sei Vachada kukupa mufaro kusvikira nguva chaiyo yaunovashuvira husiku hwakanaka.
Zvakaoma sekutenda iyo Teacup Pomeranian yaimbove yakakura kwazvo.
Vanyori venhau dzakaitika vanocherekedza kuti madzitateguru ekutanga erudzi urwu airema anenge 30-40 mapaundi.
Icho chinotsanangudza chimiro chePomeranian ndiro jasi ravo repamusoro uye nzeve dzavo dzinoyevedza.
Bhachi ravo rakapetana kaviri raivadzivirira kubva kuchitonhodza munzvimbo dzinotonhora, nepo mhumhi yavo diki diki yakaita nzeve dzakaderedza mikana yemwana yekuwana chando.
Aya maficha aireva kuti imbwa iyi yaigona kurarama mumamiriro ekunze akaomarara eArctic eIceland kwaive nerudzi urwu rwakamboshandiswa kudhonza materu uye kuchengetedza dzimba!
Pomeranians vakawana kuzorora kwavo kukuru pavakava chipfuwo chaikosheswa chaMambokadzi Victoria . Aive mutsigiri mukuru wekudzikisa hukuru uhwu uye izvi zvakatanga chirongwa chekuberekesa chakatungamira kudiki diki Pom yatinoziva nhasi.
Pamusoro pekubvumidzwa kwaMambokadzi Victoria iyo Pomeranian yakaratidzirwa ku1891 Crufts imbwa show kwavakaisa pekutanga.
Sezvo kudiwa kwakakura kwePomeranian ndizvo zvakaita kudiwa kwembwa diki diki. Pakutendeuka kwezana ramakumi maviri nemasere kudiwa kwakaringana kwakakura kwePomeranian diki.
Saka kuburikidza nesarudzo yekuchera iyo Teacup yakagadzirwa.
Uyu musiyano mudiki wePomeranian ikozvino unodiwa nevanhu pasirese.
Teacup Pomeranian anotonga mukuru paInternet! Jiff the Pomeranian ndomumwe wevakakurumbira canines uye ane vanopfuura mamirioni gumi vateveri.
Rudzi urwu rune gumi nematanhatu mavara epamutemo saka iwe une zvakawanda zvekusarudza kuti uwane yakakwana pup.
Pomeranians akachengetwa nevaridzi vanozivikanwa vanoverengeka vanosanganisira Harry Houdini naCharles Darwin.
Nekuda kweichi chidiki chidiki kukura uye rudo hunhu ivo vanowanzo gadzira yakanakisa yekurapa imbwa.
Iyo Tale yePie uye iyo Patty-Pan yakanyorwa naBeatrix Potter uye inoratidzira mutema Pomeranian anonzi maDuchess.
Rudzi urwu nderwemu Toy Group asi anonyanya kushandiswa kufambidzana.
Ona Nyaya Inoenderana: Micro Pomeranian Nhungamiro: 5 Unofanirwa-Verenga Chokwadi
Nehurombo iyo Teacup Pomeranian inotakura mukurumbira we kuva diva rakaparadzwa .
Nhau dzakanaka ndedzekuti ichi hachisi chokwadi.
Kana yakanyatsodzidziswa uye kushamwaridzana nerudzi urwu rwunofadza uye rwunoita shamwari inovimba uye ine hupenyu.
Imbwa diki kazhinji dzinoratidzika kunge dzine mukurumbira wekuzvibata zvakashata, yappy uye kunetseka. Hunhu hwekutaura hunosanganisirwa nezvizvarwa zvakaita seTeacup Pomeranian kazhinji zvinokonzerwa nekudzidziswa kusingaenderane.
Kana iwe ukaramba wakabatikana, zvakanaka uye zvinoenderana nekudzidziswa yako Pom ipapo ruzha harufanire kunge iri nyaya.
Iyo Pomeranian inobudirira nekutariswa.
Ipo mini Pop ichave iri nhengo diki yemhuri yako ivo vanogona kunge vaine hunhu hukuru.
Vanoda kuve padhuze nevana uye vachitamba iwe unongoda iwe dzidzisai vana venyu maitiro ekuzvibata wakakomberedza imbwa diki. Kungoita nekuti idzi vana dzakakura-tochi hazvireve kuti dzinofanirwa kubatwa saizvozvo!
Pakazara ichi chizvarwa chine hushamwari chakakomberedza vana.
Kana iwe uchikwanisa kuve nechokwadi chekuti dzimwe mhuka uye vanhu vemumba mako vanogona kubata mwana uyu neruremekedzo rwavanofanirwa saka iyo Teacup Pomeranian imbwa yako.
Basa rakawanda rinoenda mukuberekesa mwana uyu. Izvo zvakanyanya kuomesa kubereka uye zvinowanzoda kutariswa zvakanyanya kupfuura zvakajairwa maPomeranians.
Nekuda kweizvi iwe unofanirwa kutarisira kubhadhara inosvika $ 1200 yeiyo Teacup Pomeranian puppy.
Dzimwe dzinoratidza mhando dzevana dzakatengeswa nemadhora zviuru mazana manomwe!
Kana iyi teki yemutengo yakawandisa saka kune akati wandei emhando dzakasiyana dzimba dzekugara muUS. Nekudaro kutsvaga mbwanana kubva kune pekugara hakuna kujairika.
Mbwanana $ 1200 +
Mukuru $ 900- $ 1200
Kugamuchirwa $ 75- $ 350
Ziva nezve hutano hweTeacup. Rudzi urwu runouya nemhando dzakasiyana dzehutano uye dzinogona kudhura kwazvo kurapa.
Nekuti rudzi urwu rwakakurumbira unofanirwa kunge uchitsvaga kunze kwekubiridzira.
Ita shuwa kuti muberekesi waunotora haasi chigayo chembwanana chakavanzika. Iwe unofanirwa kukumbira referensi kubva kuna vet uyo muberekesi anoshanda naye.
Iwe unozoda yakanaka imbwa inishuwarenzi nerudzi urwu - ita shuwa kuti pasuru yako inovhara zvese zvinogoneka maitiro ako Teacup Pom achada.
Shanda nachiremba anoziva. Sezvo Teacup Pom yakatemerwa kune dzimwe nyaya dzehutano unofanirwa kuwana chiremba anoongorora mukurapa imbwa diki dzerudzi.
Funga zvakadzama pane kana imbwa iyi yakakunakira iwe. Kana iwe uchifarira hunhu hwaTeacup Pomeranian nemweya asi usina kugadzikana nezve zvingangoitika zvehutano saka unofanirwa kufunga nezvePomeranian yakajairwa.
Hunhu hunosiyanisa imbwa iyi hudiki sei ivo.
Chavo chinotevera chinonyanya kusiyanisa hunhu hwavo.
Nekuti imbwa iyi ine jasi mbiri inofadza uye yakapfava kubata.
Iwe unowanzo kuwana iyi imbwa mune yakazara uye ine fluffy jasi. Nekudaro avo vanoshuvira kushandisa shoma nguva yekushambadzira vanogona kusarudza kupfupisa bvudzi, senge teddy bere kana mbwanana yakatemwa. Ingo rangarira rudzi urwu rwuri kure nehurema hwehukama zvichienzaniswa nemamwe marudzi nekuda kwekuwandisa kwayo kuwanda. Kana iwe kana nhengo yemhuri uchirwara nehuswa zvino iyi ingangodaro isiri yako iwe.
Rudzi urwu runofanirwa kutaridzika sediki Pomeranian.
Ivo vanochengeta nzeve dzavo dzakasarudzika uye muswe une hunyoro uye zvachose vanochengeta chitarisiko chavo chakaita semakava.
Yako Teacup Pomeranian ichave isingasviki matanhatu masendimita kureba uye inorema kutenderedza 3-7 mapaundi.
Nekudaro sezvo iri diki saizi musiyano wePomeranian isingazivikanwe zviri pamutemo unogona kuwana mamwe maTeacups akakurisa zvishoma pane izvi.
Iyi imbwa inouya mu13 yakasarudzika jasi mavara saka iyo inopa muraraungu wesarudzo kune vanotarisira varidzi kusarudza kubva.
Mavara anonyanya kufarirwa nembwa iyi akatsvuka kana orenji asi mamwe mavara anosanganisira: kirimu, beaver, bhuruu, merle uye matatu-mavara.
Iyo Teacup Pomeranian yekureruka yekuchengetedza maitiro inoita izvi kubereka akakwana kune vanotanga uye vanhu vakabatikana.
Nekuda kwehukuru hwavo hudiki, rudzi urwu harudi kurovedza muviri kwakawanda.
Ivo imbwa imbwa uye vanowirirana kupfuura mushandi.
Kana iwe uchikwanisa kuenderana nezvinodiwa zvekushambidzika uye kudurura ipapo iwe unozogona nyore nyore kutarisira iyi pooch.
Rudzi rudiki urwu rwunofara nekufamba-famba kutenderedza block.
Idzi imbwa dzinoda maminetsi gumi neshanu zvakanyanya uye dzinofarira zvemagariro mafambiro kupfuura echimiro chemuviri.
Iwe unofanirwa kuedza kupa imbwa iyi kanenge maviri mafupi mafambiro zuva rega rega.
Mushure mekufamba kwako iwe unoshuvira kushandisa yakawanda nguva uchitamba nePom yako ipapo uyu pup anoda kuzviita.
Urwu rudzi rwekutamba urwo runofarira kushandisa nguva nemhuri yavo.
Unogona kutamba dzakasiyana siyana mitambo navo .
Funga kutora kana kugadzira kosi yekumhanyisa yekuchengetedza imbwa yako spry uye inoshanda. Ehe chenjera paunenge uchitamba kuseri kwemba uye usazombovasiya kunze vasina kutarisirwa. NePom Teacup iwe unogona kutopedza nguva yekutamba mukati meimba sezvo iyi saizi diki yemuputi ichiita kumhanya yakatenderedza imba yekutandarira Olympian feat.
Kunyangwe iwe uchipa yako Pom kurovedza muviri kuburikidza nekufamba kushoma, nguva yekutamba kuseri kwemba kana yekukurumidza yekugadzirira kosi yekumhanyisa mumba yekutandarira, chero chimiro chekurovedza muviri chine chokwadi chekuichengeta ichifara.
Zviitiko Zvezuva Nezuva: 15-30 maminetsi.
Chiitiko Chekuita: 2/5.
Chaunofarira Chiitiko: Tora.
Kutenda kune iyi yerudzi rwejasi jasi ivo vanoteura yakawanda!
Kune varidzi vanoshuvira kuchengetedza nguva zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti iwe upe yako Pomeranian Teacup bvudzi pfupi rakachekwa senge imbwanana kapfupi kana teddy bere rakatemwa.
Kwete chete izvo zvipfupi bvudzi rinove nyore kubata, ivo nzira yakachengeteka zvakanyanya yekuveura imbwa yako zvachose (izvi zvinogona kutungamira kune alopecia mune dzimwe nguva zvisingawanzoitika).
Zvakawanda zvekushambidzika zvinodiwa zvinoshanda kune iyo Teacup Pomeranian. Iwe unofanirwa kukwesha iwo 2-3 pasvondo, kukwesha mazino avo uye kucheka nzara pazvinenge zvichidikanwa (kazhinji kamwe pamwedzi). Munguva yekudonhedza mwaka (chirimo uye kudonha) iwe uchafanirwa kukwesha zuva nezuva kuti uvabatsire kutsiva yavo yepasi jasi.
Nekudaro kupfuura izvi zvekutanga zvekutarisira ivo vari vepasi pekuchengetedza pup.
Usanyengerwe neichi chidiki chidiki saizi!
Kune imbwa diki vane yekutsanya metabolism uye vanoda yakanaka saizi chikafu.
Mutemo wekutanga wechigunwe cherudzi urwu ungave wekudyisa wakakomberedza 1 mukombe wembwa diki inobhururuka kaviri pazuva.
Kunyangwe izvi zvisingareve kuti iwe unofanirwa kunge uri pamusoro pekudyisa mbwanana yako nekutya hypoglycemia, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekutora yepamusoro-soro kibble inoitirwa imbwa diki.
Izvo zvakakosha kuti upe mwana wako chikafu chakaringana icho chaanoda.
Kunyangwe hazvo murume kana murume, vese varume nevakadzi Teacup Pomeranians vanowanzorema pasi pemakirogiramu manomwe saka ita shuwa yekutarisa zvesimba ravo.
Nepo iyo Teacup Pomeranian ingaite senge yakatsvinda, kungofanana nedzimwe dzakawanda teacup inobereka ivo vanogona kutambura kubva kune akasiyana ehutano matambudziko.
Nekuti iwo madiki kwazvo ivo vanowanzo tenderera - kunyangwe kusvetuka kubva pachigaro kunogona kukonzera kutsemuka murudzi urwu.
Kunyangwe vafudzi vazhinji vachiedza napose pavanogona napo kuti vave nechokwadi chehutano hwakanaka hwembwanana, yega yega Teacup rudzi inouya neyakawedzera mukana kune mamwe mamiriro ehutano akadai se:
Hypoglycemia: Mamiriro apo imbwa ine shuga shoma yeropa, kana glucose mune yavo system.
Hydrocephalus: Iyo inozivikanwawo se mvura pauropi uye inoitika kana hura huchiwedzera mukati mehuropi hwembwa.
Matambudziko emazino: Chirwere cheGum chinonetsa kune akawanda madiki emhando. Mune zvimwe zviitiko mazino emwana wembwa anogona kuramba kudonha zvakasununguka uye zvinoda kupindira kwevechiremba.
Nyaya dzekufema: Teacup inobereka (kunyanya avo vane zviso zvakatsetseka) zvinowanzoitika kune hurema uye nenyaya senge trachea kupunzika.
Kunyangwe pasina chizvarwa chinouya pasina njodzi iyo Teacup Pomeranian inogona kudhura yakawanda muzvikwereti zvevet nekuda kwezviitiko zvakajairika zvehutano.
Ita shuwa kuti unonzwisisa njodzi idzi, ita tsvagiridzo yako uye ushande chete nevabatsiri vane mukurumbira.
Yakareba Sei Iyo Teacup Pomeranian Kurarama?
Pomeranian akajairika anorarama makore anosvika gumi nemaviri kusvika gumi nematanhatu asi nekuda kwehutano nyaya Teacup Pomeranians vanowanzove newe unogona kutarisira kuti hupenyu hwavo huchave hupfupi makore mashoma.
Ipo iyo Teacup Pomeranian ichitaridzika senge toyi izvi hazvireve kuti vanofanirwa kusiiwa vasina kudzidziswa senge.
Nekuda kwehukuru hwavo hudiki mhando yakanakisa yekudzidziswa ichave yekusimbisa kwakanaka.
Kuita chero chimiro chekudzidzisa kwakanaka pakutanga uye kazhinji kunopa akawanda mabhenefiti. Kubva pakusimudzirwa kwepfungwa kune hunhu hwakanaka, kungopa rudzi urwu kudzidziswa kwekuteerera uye hunyengeri kunokanganisa nhema dzekuti imbwa dzese diki dzakapusa.
Nekudaro iyo Teacup Pom inogona kunge ichinetsa kune imbaetrain pakutanga.
Kushivirira uye kuomarara inzira huru dzekubatsira mbwanana yako kuziva kwekuenda.
Iwe unofanirwa zvakare kushandisa nguva yekudzidzira crate.
Kwete chete kuti crate kudzidziswa kunopa mwana wako nzvimbo yakachengeteka asi zvakare kunobatsira kuita iyo nzira yekugadzirisa dzimba kuve nyore uye nekukurumidza.
Nekuda kwekukura kudiki uku, kuvasiya pamba voga kuti vadzungaire mumba vakasununguka haisi pfungwa yakanaka sezvo vachigona kukuvara iwe usingazive.
Kushamwaridzana kune rimwe divi kunouya nyore kune iyo Teacup Pomeranian.
Kana iwe uchikwanisa kuve nechokwadi chekuti zviitiko zvavo zvinoramba zvakanaka, iyo Teacup Pom inogona kuve nyore kubuda uye kuvimba chivimbo kana zvakanyatso shamwaridzana .
Nekudaro nekuti imbwa diki iwe unofanirwa kuedza nepese paunogona napo kuti dzisangane dzakadzikama, imbwa hombe panzvimbo pedzakakura-dzakakosheswa imbwa hombe.
Mazhinji akashata kana akasimba ezviitiko ane imbwa hombe anogona kusiya mwana wako achitya imbwa hombe.
Kunze kwekuteerera kwekutanga, kudzidzira dzimba uye kufambidzana, iyo Teacup Pomeranian haidi yakawanda yekusimudzira pfungwa kana basa re canine.
Sembwa dzemakumbo vanofara nemafambiro mapfupi ekusimudzira pfungwa dzavo uye imwe nguva yakanaka nevanhu vavanoda.
Tarisira kuve uine yakasununguka kwazvo purogiramu kana zvasvika pakuva nerudzi urwu!
Pakazara iyo Teacup Pomeranian ndeimwe yesarudzo dzakanakisa kune vanogara mufurati.
Saizi yavo diki yakakwana kune avo vasingakwanise kupa yakakura nzvimbo.
Zvisinei nekuda kwekuti pooch iyi idiki, usatarisira hunhu hwavo kudzikirawo.
Vane hunhu hukuru izvo zvine ushingi, chivimbo uye rudo.
Nekuti iyo Teacup Pomeranian haisisiri imbwa inoshanda (semadzitateguru avo eSpitz), zviri nyore kutarisira.
Kana iwe uchikwanisa kuve nechokwadi chekuti fluffy undercoat inochengetwa pakapfupika kana kukweshwa kanokwana kaviri kana katatu pasvondo, iyi imbwa yese inoda kuita kwekutanga kurovedza muviri uye zvimwe zvemhando yepamusoro imbwa chikafu kuti vagare vachifara uye vakagwinya.
Nekudaro iwe unofanirwa kuziva mamiriro avo ehutano.
Sekudzidzisa teacup idzi njodzi dzehutano hazvidziviririke uye njodzi yekuti imbwa yako iine imwe mamiriro ichiri yakakwira kupfuura kuwana Pomeranian yenguva dzose.
Pakazara kana uchigara muguta kana mumasabhabha imbwa diki idzi dzinova shamwari yakanaka.
Tiudze chero ipi yemibvunzo yako muchikamu chemashoko pazasi ...
35 yemasanganiswa Akanyanya Husky aunoda kusangana nawo
3 Mhando dzeSevhisi Imbwa
unowana sei chocolate lab
marii ma bulldogs eFrance anodhura
imbwa hadzi mazita embwa huru